News Collection: होसियार, नेपालका अमेरिकी एजेन्ट नाङ्गिदैछन्!
होसियार, नेपालका अमेरिकी एजेन्ट नाङ्गिदैछन्!
By Salokya, on November 29th, 2010
अमेरिकालाई टाउको दुखाउने साइट बनिरहेको विकिलिक्सले अब नेपाल पनि हल्लाउने निश्चित भएको छ। विकिलिक्सले हात पारेको साढे दुई लाखभन्दा बढी अमेरिकी गोप्य कूटनीतिक कागजातमध्ये नेपालसम्बन्धी २ हजार ६ सय कागजात रहेको छ। तीमध्ये काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएका २ हजार २ सय ७८ मेमोहरु छन्। त्यसमा पनि ८४ लाई अति गोप्यको दर्जा दिइएको छ, १ हजार २ सय ९९ मेमो गोप्य हुन्।
आशा गरौँ, यी कागजात सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी दूतावासमा गएर को को नेताले के के बोलेछन्, सब छताछुल्ल हुनेछ। अमेरिकी एजेन्ट बनेर क-कसले यहाँ काम गरिरहेका छन्, सब नाङ्गेझार हुनेछन्। कुन कुन पत्रिकाका सम्पादक, नागरिक समाजको मुकुन्डो ओढेका कुन-कुन व्यक्तिले अमेरिकी दूतावासमा गएर के के चुक्ली लगाएछन्, सब थाहा हुनेछ। उनीहरुको दिनको चैन र रातको निद्रा हराउने बेला आएको छ।
विकिलिक्स इराक युद्धसम्बन्धी अमेरिकी सेनाको गोप्य कागजात सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएको साइट हो। यसले अर्को चरण अन्तर्गत अमेरिकाको कुटनीतिक गोप्य कागजात सार्वजनिक गर्न थालेको हो। विश्वभर रहेका २७४ वटा दूतावासले सन् १९६६ देखि सन् २०१० सम्म वासिङटनमा रहेको विदेश मन्त्रालयमामा पठाएका मेमोहरु विकिलिक्सले आइतबारदेखि सार्वजनिक गर्न थालेको हो। आइतबार सार्वजनिक भएका कागजातमा नेपालसम्बन्धी कुनै कागजात परेका छैनन्। नेपालसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक हुने बित्तिकै हामी माइसंसारमा पनि राख्‍ने नै छौँ।
अमेरिकी सरकारले विकिलिक्सको यस्तो कदमले अमेरिकाको मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्छ भन्दै आलोचना गर्दै सार्वजनिक गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर विकिलिक्सले भने यसलाई सार्वजनिक गरेरै छाड्यो। अबका केही हप्ताभित्रै नेपालसम्बन्धी कागजात पनि सार्वजनिक हुनेछन्। त्यसपछि हेरौँ न अमेरिकी दूतावासले के केसम्म गर्दो रहेछ नेपालमा।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको कागजातले के के खुल्यो? केही नमूना
चीनको पोलिटब्युरोले गुगलको कम्प्युटरमा ह्याक गर्न निर्देशन दिएको
साउदी अरबका राजाले इरानमा आक्रमण गर्न अमेरिकालाई बारम्बार आग्रह गरेको
इरानले उत्तरकोरियाबाट युरोपेली देशमा हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्राप्त गरेको
अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति अहमद जिया मसूदले युएई भ्रमणमा जाँदा ५ करोडभन्दा बढी अमेरिकी डलर रकम कहाँबाट लिएको र कहाँ लान लागेको नखुलाई राख्न दिएको
गुआन्टानामो खाडीमा रहेका बन्दीहरुलाई अरु देशमा पठाउनका लागि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुले गरेको बार्गेनिङ पनि बडो रमाइलो छ। ओबामालाई भेट्ने भए एक जना बन्दी लिएर जाऊ भनेर स्लोभेनियालाई भनेको रहेछ। सानो टापु देश किराबाटीलाई चाहिँ एक जना चिनियाँ मुस्लिम बन्दी लिने भए हजारौँ अमेरिकी डलर दिन्छु भनेर फकाएका रहेछन्।